ဗိုက်မဝမချင်း အဝအကားစားရမယ့် "လျှာလည်လည်" ရဲ့ ဝက်သားတုတ်ထိုးဘူဖေး
ဗိုက်မဝမချင်း အဝအကားစားရမယ့် “လျှာလည်လည်” ရဲ့ ဝက်သားတုတ်ထိုးဘူဖေး
21 Aug 2018 . 8:33 PM
ဝက်သားတုတ်ထိုးဆိုတာမျိုးက စားရတာ အီဆိမ့်ပြီး အရသာရှိသလောက် လမ်းဘေးအထမ်းသည်လေးတွေ၊ ခုံပုလေးတွေနဲ့ စားရတာ ရှိုးပဲ့၊သက်တောင့်သက်သာမရှိတဲ့အမျိုးမို့လား?
တစ်ခါတစ်ခါစားမိပြန်ရင်လည်း လက်လွန်ခြေလွန်တွေဖြစ်ကုန်ရတာနဲ့၊ ပါးစပ်က ဘရိတ်မအုပ်နိုင်တာနဲ့ ငွေရှင်းရတဲ့အချိန်ကျရင် သောင်းချီပြီး ပေးရတာမျိုးလေ။ ခုများတော့ အဲ့လို ဒုက္ခတွေဝေးပြီး ပါးစပ်ကိုပါ ဘရိတ်မအုပ်တမ်း Non-stop ဆွဲလို့ရမယ့် ဝက်သားတုတ်ထိုးဆိုင်ပေါ်လာပြီတဲ့။
“ဝက်သားတုတ်ထိုး အဝစားဘူဖေး” တဲ့။ ဘယ်လိုတောင်များလဲပေါ့။ သူက အသစ်ဖွင့်ထားတဲ့ ဝေဇယန္တာလမ်းပေါ်က လားရှိုးညဈေးထဲမှာ ဆိုင်ဖွင့်ထားတာ။ တစ်ယောက်ကို ၉၉၀၀+tax ပေးရုံနဲ့ ဝက်သားတုတ်ထိုးကို အဝဆွဲဆိုပဲ။ ဒါမျိုးဆို နာမည်ကြီးနေလွန်းတော့ အခရာကလည်း သွားခဲ့စားခဲ့သမျှ ဝက်သားတုတ်ထိုးဘူဖေးဠီကာကို ကိုယ့်ရောင်းရင်းအစားသမားတွေအတွက် မနှေးမမြန် သတင်းပို့လိုက်ဦးမှ။
ဆိုင်နာမည်က “လျှာလည်လည်” တဲ့။ အမှတ် ၆၆၊ ဝေဇယန္တာလမ်း၊ ရတနာလမ်းနဲ့ မေတ္တာလမ်းကြား၊ တောင်ဥက္ကလာမြို့နယ်ထဲက Lashio Night Market ဝင်းထဲမှာ ရှိတာ။ ဆိုင်လေးကတော့ ကျဉ်းကျဉ်းပဲ။ ပတ်လည်စားပွဲဝိုင်းရှည်ကြီး တစ်ခုရယ်၊ လူ ၄ယောက်ထိုင် စားပွဲခုံ ၆ခုလောက်ရယ်ပဲ ရှိတယ်။
သူ့ဆီမှာ ဝက်သားတုတ်ထိုး ဘူဖေးကို တစ်နာရီခွဲ အချိန်အတွင်း အဝစားရောင်းပေးတာ။ ဝက်သားတုတ်ထိုးတင်လားဆိုတော့ နိုးပါနော်။ ကြက်သားတုတ်ထိုး၊ အမဲသားတုတ်ထိုး၊ ငုံးဥ၊ပဲပြား၊ တိုဟူး၊ ရုံးပတီသီးစတဲ့ အသီးနှံတုတ်ထိုးတွေအပြင်၊ မုန်ညင်း၊ ဆလတ်၊ ဂေါ်ဖီ နဲ့ ကြာဆံကြော်၊ ခေါက်ဆွဲကြော်တွေပါ ရသဗျား။ နည်းနည်းတော့ စိတ်ဝင်စားသွားပြီတော့ လုပ်လိုက်။
စားတာက စားပြီးပြီ အချိုတည်းဖို့ဆိုရင်ရောဆို ရေခဲမုန့် ၆မျိုးလောက်ရယ်၊ လီမွန်တီးနဲ့ လိမ္မော်ရည်ပါ Free Flow တဲ့။ ဝက်သားတုတ်ထိုးတမျိုးတည်းဆို မှားသွားမှာပေါ့။
ကဲ…စားတော့စားချင်လို့ ရောက်သွားပါပြီတဲ့။ ဘယ်လို မှာစားပြီး ဘယ်လို ငွေရှင်းရမလဲဆိုတာ အခရာက ဒီအစားတလိုင်းက အပြည့်စုံဆုံး ရှင်းပြမယ်နော်။
(၁) ပထမဆုံး Lashio Night Market ရဲ့ Cashier ကိုသွား ပိုက်ဆံသုံးချင်တဲ့ပမာဏကို ကတ်လုပ်။ (လျှာလည်လည်ဆိုင်ရဲ့ ဘေးကပ်ရက်တင်နော်)
(၂) ပြီးတာနဲ့ ဆိုင်ထဲဝင် ကောင်တာမှာ တစ်ခါတည်း ငွေရှင်းရမယ်။ Tax အပါအဝင် စုစုပေါင်း ၁၀၃၉၅ ကျပ်ကျပါတယ်နော်။
(၃) ပြီးရင် ဝက်သားတုတ်ထိုးတန်းကြီးကိုသွား ကြိုက်ရာတုတ်ထိုးတွေအကုန် ပန်းကန်တစ်ခုထဲ ထည့်။ (ဒီနေရာမှာ တစ်ခုသတိထားရမှာက ကိုယ်ကုန်နိုင်သလောက်ပဲ အရင်ယူနော်။အချောင်း ၂၀ ဆို ၂၀ ပေါ့။ ဘာလို့ဆို မကုန်တာနဲ့ ပိုက်ဆံပြန်ကောက်မှာဆိုတော့ လောဘမကြီးနဲ့။ အေးဆေး ကုန်သလောက်ပဲယူ။ ခနခနထယူရတော့ ဗိုက်တောင်ချောင်သေး…နော့်။)
(၄) ပြီးရင် ဘေးက ကိုယ်စားချင်တဲ့ ကြက်သားတုတ်ထိုးတွေ၊ အမဲသားတုတ်ထိုးတွေယူလို့ရပြီ။ (အများကြီးတော့မယူနဲ့နော်။ ဒီနေရာမှာ မင်းသားက ဝက်သားတုတ်ထိုးမလား။ ကျန်တာတွေ ၃,၄ ချောင်းစီလောက်ဆို အစုံစားရပြီ)
(၅) ကြက်၊ အမဲစွပ်ပြုတ်အိုးကြီးတွေလည်း ရှိသေးတယ်။ အားရှိတယ်ဆိုပေမယ့် ကိုယ်တွေကတော့ ထိတောင်မထိခဲ့ဘူးရယ်။ (အရည်တွေသောက်တာများပြီး မစားနိုင်ရင်ဒုက္ခလေ)
(၆) ကြာဆံကြော်၊ခေါက်ဆွဲကြော်နဲ့ အသီးအနှံတုတ်ထိုးတွေ နည်းနည်းစီထည့်။ အရည်ထဲထည့်ဖို့ မုန်ညင်းစိမ်းနည်းနည်းယူ။
(၇) အချဉ်ရည်စပ်ကြမယ်။ အချဉ်စပ်ဖို့ဆို သူပေးထားတဲ့ ထန်းလျက်နဲ့ငရုတ်သီးချဉ်က ထန်းလျက်အချိုးဆပိုများတော့ နည်းနည်းလေးချိုတယ်။ ချဉ်ချဉ်စပ်စပ်ဆို ငရုတ်သီးစိမ်း၊ ငံပြာရည်ထည့်ပြီး သံပုရာသီး ၃,၄ စိတ်လောက်ညှစ်လိုက်။ အိုခေသွားပြီကွယ်။
ဒါဆို ကိုယ်ယူထားတဲ့ပန်းကန်တွေကို ကိုယ့်စားပွဲမှာချ။ သူတို့ပြင်ပေးထားတဲ့ ဂတ်စ်မီးဖိုပေါ်က အရည်အိုးလေးထဲ တုတ်ထိုးတွေစိမ်၊ မုန်ညင်းစိမ်းလေးပစ်ထည့်ပြီးစားရုံပဲ။
အရသာကတော့ ဝက်သားတွေအကုန်လုံးနူးညံ့နေပြီး သန့်ရှင်းနေတာပဲ။ အသားထဲကို ပေါင်းထားတဲ့ပဲငံပြာရည်ဓါတ်အပြည့်အဝဝင်တယ်။အသားညှီတာ၊ နံတာ လုံးဝမရှိဘူး။
ဒီနေရာမှာ တစ်ခုမှတ်ထားရမှာက အချိန်က တစ်နာရီခွဲပေးထားတာဆိုတော့ များများစားချင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ ဝက်သားတုတ်ထိုးတွေက အိုးထဲမထည့်ခင်တည်းကတင် နူးပြီးသားအခြေအနေမို့ ဂတ်စ်အိုးနဲ့ အရည်အိုးထဲပြန်စိမ်တဲ့အခါ အရည်ပူပြီး မုန်ညင်းစိမ်းတွေကျက်တဲ့အနေဆိုတာနဲ့ မီးပိတ်ပြီးသာ ဆွဲတော့နော်။ နို့မို့ မီးဖွင့်ထားပြီး တချောင်းစီ အိုးထဲကယူပြီးစားနေရင် ပူတာကိုအအေးခံနေရတာနဲ့တင် အချိန်ပြည့်နိုင်တယ်လေ။ အရည်ကတော့ ပဲငံပြာရည်ပိုများတဲ့ပုံပဲ။ အချိုဓါတ်ကဲတယ်။
စားပြီးရင်တော့ ရေခဲမုန့်လေး အချိုတည်းရုံပဲ။ သတိထားဖို့က ပိုတာတွေ၊ကျန်တာတွေ နည်းနိုင်သမျှ နည်းပါစေနော်။ ကဲ…ဒီလောက်ဆို လားရှိုးညဈေးက အဝစားဝက်သားတုတ်ထိုးဘူဖေးအကြောင်း သိသွားလောက်ပြီမလား?
၉၉၀၀ ဝန်းကျင်ဆိုတော့ မစားနိုင်တဲ့သူတွေအတွက်မတန်ပေမယ့် တစ်ခါစား အချောင်း ၅၀,၆၀ သမားတွေအတွက်တော့ ဆိုင်ခန်းသပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့ အဆင့်မြင့်မြင့်သန့်သန့်လေးစားရတာနဲ့တင် တန်ပြီထင်တာပဲ။ နိုင်ငံခြားသားမိတ်ဆွေတွေလည်း ဒါက ငါတို့လူမျိုးအကြိုက် ဝက်သားတုတ်ထိုးကွဆိုပြီး ဂုဏ်ဆာလို့လည်းရပြီလေ…
ဆိုတော့ကာ ဝက်ဆို အကောင်လိုက်ပါးစပ်ထဲမောင်းသွင်းတတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ၊ ဘော်ဒါဘော်ကျွတ်တွေများရှိရင် ရုံးအပြန်လေး ဝက်သားတုတ်ထိုး အဝဝင်ဆွဲလို့ရပြီနော်။ ဒါမျိုးက လက်မနှေးထားမှ တော်ကာကျမှာဆိုတော့ ကိုယ်နဲ့တူတူပါရမီဖြည့်ဘက်စားဖော်စားဘက်တွေကို တစ်ခါတည်း Mention သာခေါ်သွားပေတော့နော်။
ဗိုကျမဝမခငျြး အဝအကားစားရမယျ့ “လြှာလညျလညျ” ရဲ့ ဝကျသားတုတျထိုးဘူဖေး
ဝကျသားတုတျထိုးဆိုတာမြိုးက စားရတာ အီဆိမျ့ပွီး အရသာရှိသလောကျ လမျးဘေးအထမျးသညျလေးတှေ၊ ခုံပုလေးတှနေဲ့ စားရတာ ရှိုးပဲ့၊သကျတောငျ့သကျသာမရှိတဲ့အမြိုးမို့လား?
တဈခါတဈခါစားမိပွနျရငျလညျး လကျလှနျခွလှေနျတှဖွေဈကုနျရတာနဲ့၊ ပါးစပျက ဘရိတျမအုပျနိုငျတာနဲ့ ငှရှေငျးရတဲ့အခြိနျကရြငျ သောငျးခြီပွီး ပေးရတာမြိုးလေ။ ခုမြားတော့ အဲ့လို ဒုက်ခတှဝေေးပွီး ပါးစပျကိုပါ ဘရိတျမအုပျတမျး Non-stop ဆှဲလို့ရမယျ့ ဝကျသားတုတျထိုးဆိုငျပျေါလာပွီတဲ့။
“ဝကျသားတုတျထိုး အဝစားဘူဖေး” တဲ့။ ဘယျလိုတောငျမြားလဲပေါ့။ သူက အသဈဖှငျ့ထားတဲ့ ဝဇေယန်တာလမျးပျေါက လားရှိုးညဈေးထဲမှာ ဆိုငျဖှငျ့ထားတာ။ တဈယောကျကို ၉၉၀၀+tax ပေးရုံနဲ့ ဝကျသားတုတျထိုးကို အဝဆှဲဆိုပဲ။ ဒါမြိုးဆို နာမညျကွီးနလှေနျးတော့ အခရာကလညျး သှားခဲ့စားခဲ့သမြှ ဝကျသားတုတျထိုးဘူဖေးဠီကာကို ကိုယျ့ရောငျးရငျးအစားသမားတှအေတှကျ မနှေးမမွနျ သတငျးပို့လိုကျဦးမှ။
ဆိုငျနာမညျက “လြှာလညျလညျ” တဲ့။ အမှတျ ၆၆၊ ဝဇေယန်တာလမျး၊ ရတနာလမျးနဲ့ မတ်ေတာလမျးကွား၊ တောငျဥက်ကလာမွို့နယျထဲက Lashio Night Market ဝငျးထဲမှာ ရှိတာ။ ဆိုငျလေးကတော့ ကဉျြးကဉျြးပဲ။ ပတျလညျစားပှဲဝိုငျးရှညျကွီး တဈခုရယျ၊ လူ ၄ယောကျထိုငျ စားပှဲခုံ ၆ခုလောကျရယျပဲ ရှိတယျ။
သူ့ဆီမှာ ဝကျသားတုတျထိုး ဘူဖေးကို တဈနာရီခှဲ အခြိနျအတှငျး အဝစားရောငျးပေးတာ။ ဝကျသားတုတျထိုးတငျလားဆိုတော့ နိုးပါနျော။ ကွကျသားတုတျထိုး၊ အမဲသားတုတျထိုး၊ ငုံးဥ၊ပဲပွား၊ တိုဟူး၊ ရုံးပတီသီးစတဲ့ အသီးနှံတုတျထိုးတှအေပွငျ၊ မုနျညငျး၊ ဆလတျ၊ ဂျေါဖီ နဲ့ ကွာဆံကွျော၊ ခေါကျဆှဲကွျောတှပေါ ရသဗြား။ နညျးနညျးတော့ စိတျဝငျစားသှားပွီတော့ လုပျလိုကျ။
စားတာက စားပွီးပွီ အခြိုတညျးဖို့ဆိုရငျရောဆို ရခေဲမုနျ့ ၆မြိုးလောကျရယျ၊ လီမှနျတီးနဲ့ လိမ်မျောရညျပါ Free Flow တဲ့။ ဝကျသားတုတျထိုးတမြိုးတညျးဆို မှားသှားမှာပေါ့။
ကဲ…စားတော့စားခငျြလို့ ရောကျသှားပါပွီတဲ့။ ဘယျလို မှာစားပွီး ဘယျလို ငှရှေငျးရမလဲဆိုတာ အခရာက ဒီအစားတလိုငျးက အပွညျ့စုံဆုံး ရှငျးပွမယျနျော။
(၁) ပထမဆုံး Lashio Night Market ရဲ့ Cashier ကိုသှား ပိုကျဆံသုံးခငျြတဲ့ပမာဏကို ကတျလုပျ။ (လြှာလညျလညျဆိုငျရဲ့ ဘေးကပျရကျတငျနျော)
(၂) ပွီးတာနဲ့ ဆိုငျထဲဝငျ ကောငျတာမှာ တဈခါတညျး ငှရှေငျးရမယျ။ Tax အပါအဝငျ စုစုပေါငျး ၁၀၃၉၅ ကပျြကပြါတယျနျော။
(၃) ပွီးရငျ ဝကျသားတုတျထိုးတနျးကွီးကိုသှား ကွိုကျရာတုတျထိုးတှအေကုနျ ပနျးကနျတဈခုထဲ ထညျ့။ (ဒီနရောမှာ တဈခုသတိထားရမှာက ကိုယျကုနျနိုငျသလောကျပဲ အရငျယူနျော။အခြောငျး ၂၀ ဆို ၂၀ ပေါ့။ ဘာလို့ဆို မကုနျတာနဲ့ ပိုကျဆံပွနျကောကျမှာဆိုတော့ လောဘမကွီးနဲ့။ အေးဆေး ကုနျသလောကျပဲယူ။ ခနခနထယူရတော့ ဗိုကျတောငျခြောငျသေး…နေျာ့။)
(၄) ပွီးရငျ ဘေးက ကိုယျစားခငျြတဲ့ ကွကျသားတုတျထိုးတှေ၊ အမဲသားတုတျထိုးတှယေူလို့ရပွီ။ (အမြားကွီးတော့မယူနဲ့နျော။ ဒီနရောမှာ မငျးသားက ဝကျသားတုတျထိုးမလား။ ကနျြတာတှေ ၃,၄ ခြောငျးစီလောကျဆို အစုံစားရပွီ)
(၅) ကွကျ၊ အမဲစှပျပွုတျအိုးကွီးတှလေညျး ရှိသေးတယျ။ အားရှိတယျဆိုပမေယျ့ ကိုယျတှကေတော့ ထိတောငျမထိခဲ့ဘူးရယျ။ (အရညျတှသေောကျတာမြားပွီး မစားနိုငျရငျဒုက်ခလေ)
(၆) ကွာဆံကွျော၊ခေါကျဆှဲကွျောနဲ့ အသီးအနှံတုတျထိုးတှေ နညျးနညျးစီထညျ့။ အရညျထဲထညျ့ဖို့ မုနျညငျးစိမျးနညျးနညျးယူ။
(၇) အခဉျြရညျစပျကွမယျ။ အခဉျြစပျဖို့ဆို သူပေးထားတဲ့ ထနျးလကျြနဲ့ငရုတျသီးခဉျြက ထနျးလကျြအခြိုးဆပိုမြားတော့ နညျးနညျးလေးခြိုတယျ။ ခဉျြခဉျြစပျစပျဆို ငရုတျသီးစိမျး၊ ငံပွာရညျထညျ့ပွီး သံပုရာသီး ၃,၄ စိတျလောကျညှဈလိုကျ။ အိုခသှေားပွီကှယျ။
ဒါဆို ကိုယျယူထားတဲ့ပနျးကနျတှကေို ကိုယျ့စားပှဲမှာခြ။ သူတို့ပွငျပေးထားတဲ့ ဂတျဈမီးဖိုပျေါက အရညျအိုးလေးထဲ တုတျထိုးတှစေိမျ၊ မုနျညငျးစိမျးလေးပဈထညျ့ပွီးစားရုံပဲ။
အရသာကတော့ ဝကျသားတှအေကုနျလုံးနူးညံ့နပွေီး သနျ့ရှငျးနတောပဲ။ အသားထဲကို ပေါငျးထားတဲ့ပဲငံပွာရညျဓါတျအပွညျ့အဝဝငျတယျ။အသားညှီတာ၊ နံတာ လုံးဝမရှိဘူး။
ဒီနရောမှာ တဈခုမှတျထားရမှာက အခြိနျက တဈနာရီခှဲပေးထားတာဆိုတော့ မြားမြားစားခငျြတဲ့သူတှအေနနေဲ့ ဝကျသားတုတျထိုးတှကေ အိုးထဲမထညျ့ခငျတညျးကတငျ နူးပွီးသားအခွအေနမေို့ ဂတျဈအိုးနဲ့ အရညျအိုးထဲပွနျစိမျတဲ့အခါ အရညျပူပွီး မုနျညငျးစိမျးတှကေကျြတဲ့အနဆေိုတာနဲ့ မီးပိတျပွီးသာ ဆှဲတော့နျော။ နို့မို့ မီးဖှငျ့ထားပွီး တခြောငျးစီ အိုးထဲကယူပွီးစားနရေငျ ပူတာကိုအအေးခံနရေတာနဲ့တငျ အခြိနျပွညျ့နိုငျတယျလေ။ အရညျကတော့ ပဲငံပွာရညျပိုမြားတဲ့ပုံပဲ။ အခြိုဓါတျကဲတယျ။
စားပွီးရငျတော့ ရခေဲမုနျ့လေး အခြိုတညျးရုံပဲ။ သတိထားဖို့က ပိုတာတှေ၊ကနျြတာတှေ နညျးနိုငျသမြှ နညျးပါစနေျော။ ကဲ…ဒီလောကျဆို လားရှိုးညဈေးက အဝစားဝကျသားတုတျထိုးဘူဖေးအကွောငျး သိသှားလောကျပွီမလား?
၉၉၀၀ ဝနျးကငျြဆိုတော့ မစားနိုငျတဲ့သူတှအေတှကျမတနျပမေယျ့ တဈခါစား အခြောငျး ၅၀,၆၀ သမားတှအေတှကျတော့ ဆိုငျခနျးသပျသပျရပျရပျနဲ့ အဆငျ့မွငျ့မွငျ့သနျ့သနျ့လေးစားရတာနဲ့တငျ တနျပွီထငျတာပဲ။ နိုငျငံခွားသားမိတျဆှတှေလေညျး ဒါက ငါတို့လူမြိုးအကွိုကျ ဝကျသားတုတျထိုးကှဆိုပွီး ဂုဏျဆာလို့လညျးရပွီလေ…
ဆိုတော့ကာ ဝကျဆို အကောငျလိုကျပါးစပျထဲမောငျးသှငျးတတျတဲ့ သူငယျခငျြးတှေ၊ ဘျောဒါဘျောကြှတျတှမြေားရှိရငျ ရုံးအပွနျလေး ဝကျသားတုတျထိုး အဝဝငျဆှဲလို့ရပွီနျော။ ဒါမြိုးက လကျမနှေးထားမှ တျောကာကမြှာဆိုတော့ ကိုယျနဲ့တူတူပါရမီဖွညျ့ဘကျစားဖျောစားဘကျတှကေို တဈခါတညျး Mention သာချေါသှားပတေော့နျော။